कतै तपाई पनि नुहाउँदा यी ६ गल्तीहरु त गरिरहनु भएको छैन ? - ज्ञानविज्ञान
गर्मी मौसममा दैनिक रूपमा नुहाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र धुलो र पसिनाले शरीरलाई फोहोर बनाउँछ । तर, नुहाउने समयमा पनि हामीले कैयौँ गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ । नुहाउँदा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री :
१ .वालमा टावेल बाँध्ने
प्रायःको नुहाएपछि चिसो कपालमा टावेल बाँध्ने प्रचलन हुन्छ । जुन गलत हो । यस्तो गर्दा कपाललाई मा हानि पुग्छ । कपाल छिन्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । त्यसैले नुहाएपछि हल्का रूपमा पानी पुछ्नुस् र हावामा सुक्न दिनुहोस् ।
२.लुफाको गलत प्रयोग
नुहाउने समय शरीरको फोहोर हटाउन लुफाको प्रयोग गरिन्छ । तर, प्रयोगपछि भिजेको लुफालाई बाथरुममा राख्नुहुँदैन । किनकि, यस्तो गर्दा लुफामा ब्याक्टेरिया फैलन्छ । र, अर्कोपटक चिसो लुफाको प्रयोग गर्दा शरीरमा यस्तो ब्याक्टेरिया प्रवेश गर्छ । त्यसैले जहिले पनि प्रयोगपछि लुफालाई घाममा राख्न आवश्यक हुन्छ ।
३.पैताला सफा नगर्ने
कतिपयले नुहाउने समय पैतालाको सफाइमा भने त्यति ध्यान दिँदैनन् । दैनिक रूपमा पैतालाको सफा नगर्दा फंगल इन्फेक्सन हुने खतरा हुन्छ । त्यस्तै कैयौँ प्रकारका स्किन डिजिजको समस्या पनि हुन सक्छ । त्यसैले नुहाउने वेला स्क्रबर र हातका औँलाका सहायताले राम्रोसँग पैताला तथा औँलाका काप सफा गर्नुपर्छ ।
तपार्इं दैनिक नुहाउनुहुन्छ र नुहाउँदा स्याम्पुको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने गलत गर्दै हुुनुहुन्छ । दैनिक स्याम्पुको प्रयोगले कपालमा भएको नेचुरल तेललाई हटाउने काम गर्छ । जसका कारण चमक घट्दै जान्छ । त्यसैले, हप्तामा दुईपटक मात्र कपालमा स्याम्पुको प्रयोग गर्दा
राम्रो हुन्छ ।
५.सबै कपालमा कन्डिसनर
टाउकाको सबै भागमा कन्डिसनको प्रयोग गर्नुहुँदैन । कपालको पछिल्लो भागमा मात्र कन्डिसनरको प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले, नुहाउने समय कन्डिसनरको गलत प्रयोगबाट बच्न जरुरी हुन्छ । गलत तरिकाले कन्डिसनको प्रयोग गर्दा कपाल र टाउकोसम्बन्धी समस्या देखा पर्न सक्छ ।
नुहाइसकेपछि शरीर सुकाउन हतार गर्नुहुँदैन । धेरै नुहाउनेबित्तिकै टावेलले शरीर रगट्ने र तुरुन्तै सुकाउने प्रयासमा हुन्छन् । यस्तो गर्दा स्किन सुक्खा हुनेलगायतका समस्या भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले नुहाएपछि टावेल थपथपाउने र नेचुरल ढंगले सुक्न दिनुपर्छ ।
नायाँ पत्रिका बाट
Don't Miss it साबधान, मानसिक तनावले हृदयाघात पनि हुनसक्छ
Up Next निद्रा लाग्दैन् ? गहिरो निद्राका लागि अप्नाउनुहोस् एस्तो सजिलो उपाय र सुत्दासुत्दै झट्का किन लाग्छ ?
गुलियो चिनीको बढी सेवनले हाम्रो स्वास्थ्यमा तितो बेफाइदाहरु निम्त्याउछ – जान्नै पर्ने कुरा
चिनीले मधुमेह रोग मात्र निम्त्याउँछ भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ भने एकपटक राम्रोसँग सोच्नुहोस् । तपार्इंलाई मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदयघात आदि समस्या…
के खाएमा हड्डी बलियो हुन्छ ? जान्नुहोस
साग : हरियो सागपात तथा कोसे तरकारीहरुमा पर्याप्त क्याल्सियमका साथै भिटामिन समेत पाइन्छ । यस्ता सागपात र तरकारीले हड्डीमा लवणहरुको…
अकबरे खुसार्नीका केहि फाईदाहरु यस्ता छन्
१. रगतमा चिनीको मात्रा घटाउछ । २. पिसावको विरामी लाई लाभदायक छ । ३. हाडजोर्नी लगाएतका दुखाइ घटाउछ । ४.…
पुरुषको कपाल झर्नबाट बचाउन अपनाउनुस यी घरेलु उपाय
पुरुषको कपाल झर्न रोक्ने घरेलु उपाय पनि छन् । यसका लागि खासगरी तेलले मालिस गर्ने, नरिवलको तेल, अण्डा, एभोकाडो,…
यि उपाय अपनाउनुहाेस् तपाइ सधै स्वस्थ रहनु हुनेछ
स्वस्थ जीवनका लागि केही नियमहरूको पालना गर्नु जरूरी हुन्छ। राम्रो बानी आफू पनि अपनाउनुपर्छ र आफ्ना सन्तानलाई पनि अपनाउन लगाउनुपर्छ।…
आफ्नाे परिवारसँग जतिसक्दाे समय बिताउनुहाेस्ः यस्ता छन् यसका फाइदा
सफलता भनेकाे केवल पैसा या नाम कमाउनु मात्र हाेइन । पैसा भनेकाे खुसी साथ बाँच्नु हाे । त्याे खुशीकाे लागि…
बच्चामा खानाको अरुचि भको छ ? यसरी हटाऊँ
बच्चालाई खानामा अरुचि र भोक नलाग्नुमा उनीहरुको गल्ति हुँदैन । अभिभावकको कमजोरीको परिणाम हो यो । हरेक आमाको चाहना हुन्छ,…